Yakafuridzirwa Nickel Kicheni Faucet Ne Dhonza Down Sprayer
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Kicheni Sink Chisanganiso Musoro Bvisa kunze Spray Brushed Nickel
WOWOW Kicheni Sink Muvhenganisi Bhatisisa Bvisa Kunze Spray Kunze Bronze Nickel
Rated 4.93 Kunze kwe5 yakavakirwa 54 kasitoma ratings
(54 kasitoma wongororo)
Yakagadzirwa kune izvo izvo zvinoda musanganiswa wakanakira wemazuva ano dhizaini, kushanda kwayo, uye nemhedziso yemhando, wowow Faucet Kuunganidza kunosanganisira kutenderera kwemazuva ano kukwezva neyekurudyi lever dhiraini. Iyo arc spout dhizaini yekicheni kunyura faucet inopa isina nguva uye yakajeka chitarisiko. Kuwedzera brunch nickel kupedzisa iyo inosimbisa yayo yakachena, minimalist fomu uye yakachena dhizaini. Kuwedzerwa kwakanakira kune yako yazvino kicheni!
2311601 mirairo yekuisa
Yakasarudzika Chimiro: Spout faucet yekicheni 2311601-brunch nickel seKuwedzera Sink, iyo Nheyo yakamanikana kumusoro uye Broad paSiseko, iyi Rongedzo inodzivirira kusunungura kana ichitenderera, uye zvakare Yakakodzera chiuno Point yekicheni sofa faucet Inonyanya Kuita Kudya. , Ipa kicheni yako mashoma fesses
3 Kuisa MaModes: Zara / kuyerera / kupfapfaidza, kuyerera nesimba rakasimba kunogona kuzadza bud nekukurumidza, kusuka imwe neimwe yekunyura makona, kupopera-pasitayera uchishandisa kutsetseka uye kuenderera kuyerera kuyerera michero nemiriwo zvinyoro-nyoro, uye zvakare nzira yekumbomira inomisa mvura mukati chero yakapihwa nguva yekuchengetedza mvura, kubatsira & kuchengetedza-simba
Yakakwirira Mhando: yakaiswa nickel kombi kicheni ine simbi yekubatanidza dhiraini Yakagadzirwa kubva pakakwirira Yakanaka ndarira, kuve nechokwadi chekuti mvura yacho isina mineral uye inotungamira kuti uwane mvura yakachengeteka, zinc simbi / isina stainhi simbi yekubikira yekicheni inovimbisa iyo ine simba, yekudzvinyirira inodzivirira uye yakasimba
Yakakura Wash Area: Kicheni sofa faucet ne 1.5 m (yakazara urefu) PX hose inopa yakakura yekugezesa nzvimbo, yakakwana kune maviri maviri anoshanda anoshanda, ino sosi faucet ndiye akanakisa mubatsiri kuita kuwanda kushanda!
Kubatsira kweimwe gomba kudhira pasi kicheni faucet yakasvibiswa nickel
Iyo yekudhonza-pasi faucet yakasununguka uye yakasununguka, uye inogona kudzoserwa kunzvimbo yayo yekutanga nenzira kwayo uye nyore kunyangwe ikatambanudzwa kupi. Iyo switch pane faucet inogona kuchinja pakati pekushambidza mvura uye nzira yekubuda kwemvura panguva yekuda, yakanyanya-kuguma. Rakareruka kushanda, uchifunga nezve nzvimbo dzese dzaunoda kubhururuka.
SKU: 2311601-bronze nickel Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Kicheni Sink Faucet, Yakabata Bata Chikoko, Simbi isina ngura
Ini ndakasarudzika, ndinoita tsvagurudzo yakawanda uye ndinowanzoenda kumazita emhando uye handina kumbobvira ndadzika pasi pemutsara, ndosaka ndakaita tsvagiridzo yakanaka ndisati ndawedzera iri risingazivikanwe-kwandiri zita rechiratidziro kune yangu ipfupiso yemazita anozivikanwa e dhizaini yakafanana neinopfuura kaviri kana katatu mutengo. Ichi chigadzirwa chakasimba chemhando, dhizaini ine yekudhonza pasi uye yekumwaya ficha inoshamisa, masinki angu haana kumbobvira akachena kudaro! Chinhu chega chandisingakwanise kutaura ndechekugara kwenguva refu nekuti waingova mwedzi chete, asi semapombi mazhinji emukicheni, anogara achishandiswa, uye ini handina chikonzero chekufunga kuti hazvingagare zvakafanana nemhando dzinodhura. Sarudzo huru, chienda, chengetedza iyo $, ndinofara kukurudzira pamwe nenyeredzi shanu.
Haugone kutenda kuti inorema sei uye mhando yepamusoro iyo simbi isina chinhu. Pamutengo, iwe ungapika chimwe chinhu chinofanira kunge chiri kudzedzereka, simbi yakachipa, isina kunaka kuvaka… chimwe chinhu. Kwete, ingori yepamusoro mhando tepi thats insanely cheap. Zvakakomba, dai aya aive madhora zana ndaizotenga uye ndinofara nekutenga kwangu. Izvi zvakanyanyisa kunaka pachibvumirano kuti upfuure.
Bhegi iri rinotsiva makore gumi nemashanu "zita rechiratidzo" rimwe chete rekubata rine dhonza-pasi pfapfaidzo musoro. Pombi iyi yakanga yatanga kuyerera pamusangano wevharuvhu mumuviri wepombi uye ini ndaisada kuyedza kugadzirisa iyo. Yakapedza 15 - maawa matatu kuburitsa chekare unit… ngura uye dzakabvarurwa shinda zvakaita kuti chikamu ichi chebasa chikwanise kugadziriswa. Izvo uye neyakaipa michina dhizaini yechinyakare yuniti yakagadzirirwa ropa rakawanda, ziya, uye misodzi pane yangu chikamu.
Ukuwo, pombi nyowani yakaiswa uye kuyedzwa mumaminitsi makumi matatu nemashanu. Yakabatana tambo dzakabatana dzeanopisa uye anotonhorera zvinongedzo uye imwe hombe yakamisikidzwa kubatana kune iyo tepi yekunyudza interface ... voila, zvaitwa.
aizeza pakutenga brand isingazivikanwe, asi mushure mekuverenga wongororo ndakafunga kuenda nayo. Iyo yekuisa yaive yakapusa kana ichienzaniswa nevamwe. Hapana kudikanwa kweaplumbers putty iyo yaive yakanaka kushamisika. Iko kumanikidzwa kunopihwa nemapombi aya kwakafanana nechinhu chandakave nacho kubva kune anozivikanwa maronda. Ini handikwanise kukurudzira izvi zvakakwana. Isu takaisa Svondo, saka mazuva mashoma chete (nhasi Chipiri). Kunamata kunotora nguva yakareba ipapo makore mashanu ayo anozivikanwa brand yangu akaita. Sevha mari yako uye odha iri tepi!
Semunhu anogara mufurati uyo aida kutsiva pombi yeakare yekicheni, ichi chakaita kunge chimwe chezvinhu zvakare-zvakanaka-kuva-zvechokwadi zvigadzirwa. Asi mushure megore nehafu yekushandisa kwakasimba, uye chimwe chiitiko chinonakidza chevashandi, ndinogona kutaura zvakachengeteka ichi ndicho chimwe cheakanakisa madhiri andakambowana pane WOWOW.
Kuiswa kuri nyore. Saka zviri nyore zvekuti handina kuzeza kuisunungura uye kuisazve mushure mekuenda kune imwe imba. Sokutaura kwakaita mumwe wevamwe vaongorori, iwe ungangoda kuchinjisa hosi dzinopisa uye dzinotonhora kuitira kuti kudhonza lever iwe utonhore uye kusundira kure kunopisa, asi izvo hazvina kana kukodzera kutorwa kunge mhosva.
Zvinotonyanya kukosha, inotaridzika uye inoshanda zvikuru. Ndakafunga pamutengo uyu zvaizoratidza imwe mhando yekupfeka kana makwapa nekukurumidza, asi ini ndaive ndakanganisa. Zvinogona kukanganisika zviri nyore nekuda kwepombi yepamusoro-soro iyo inogona kuenda katatu kana katatu mutengo. Iyo tepi musoro uye hosipa yakanyatso kuremerwa kuti iwedzere nekushingirira kudiki uye nekuchengetedza snugly painodzoserwa, uye switch yekuchinja pakati penzizi uye bhatani kumisa kuyerera yakaiswa-zvakanaka uye haife yakakundikana. Zvakakwana.
Iyi tepi yakakosha kukosha, kukodzera uye kupedzisa zviri zvepamusoro notch. Zvakare, mutemo wekupisa uye kumanikidza kwemvura zvakakwirira. Kuisirwa kwaive nyore, chishandiso chete chaidikanwa pakuisirwa kwangu kwaive wrench yekusimbisa mitsara yekudya kumakona anomira pamadziro pasi pesink. Iyo sisitimu inoshandiswa kumisikidza pombi pasink yakanyatsonaka kunyangwe iri kunze, ingori hombe kukodzera iyo iwe yaunogona kubatisisa simbisa pasi pesink kuti upedze kumisikidza.
Ini ndinoda iyi tepi pamusoro peiyo yakafanana American Standard faucet iyo yakatsiva. Zvaive nyore kuisa, yaive nemirau irinani uye kumanikidza, uye ini ndinofarira kutaridzika kweWOWOW pombi. Sebhonasi pombi iyi yaive $ 93.44 uye iyo American Standard tepi yakatsiva yaive $ 170 makore mashanu apfuura!
Ini handikwanise kutaura pamusoro pehupenyu hurefu asi zviripachena, asi zvinouya newadhi yegore mashanu, uye zvichibva pakunzwa kwepombi ini handina mubvunzo kuti ichagara kwenguva yakareba zvakadaro. Faucet rapfuura rakagara zvishoma pamusoro pemakore mashanu.
Isu tanga tichishandisa iyo tepi kwemavhiki matanhatu ikozvino, yakanaka kwazvo kutaridzika & inoshanda. Kuisa kwaive nyore, ini ndoda kuti iyo yekubata chinzvimbo inogona kuve yakagadzirirwa yako setup. Zvakare senge iyo ndiro yekuvhara mamwe maburi yakaverengerwa pasina imwezve mari. Ose ari maviri erukova akasimba uye pfapfaidzo zvakagadzirwa zvakanaka uye hazvimwaya mvura kwese. Iyo yekudhonza pasi ficha inoshanda chaizvo mushe; Ini ndinoda tambo inoremerwa panzvimbo pechitubu chemuchina wekudzoka. Pombi iri nyore kuramba yakachena, hairatidze mafinger prints.
Pombi yacho yakatumirwa isina mawasher maviri ayo anoshandiswa kukochekera pombi iri panzvimbo pasi pekambani. Ndakataurirana neWOWOW neemail uye ndokupindura nekukurumidza kuti vaizotumira matsva uye vakandipa ruzivo rwekutevera pane zvakatumirwa, zvakabva kuChina. Ini ndinoverenga icho sebasa rakanakisa uye zvakare chakanakisa chigadzirwa.
Ndakaongorora mapombi akati wandei apa ndikaona kuti iyi ine BETTER wongororo kupfuura ese Iwo mazita ezita rekuti faucet pasina kusarudzika. Isu tanga takagadzirira kushandisa $ 150- $ 200 pombi asi asi zvakazoitika sekunge sarudzo iri nani. Takanga tine Moen & yakatishandira zvakanaka kwemakore mazhinji asi kuve yechinyakare dhizaina mubato wepombi mukadzi wangu aida kukwidziridzira kune imwe nyowani dhizaini saka isu takasarudza iyi. Yakasvika pakutanga kupfuura zvaitarisirwa, yaive yakarongedzwa zvakanaka uye yakawedzera zvimwe zvikamu.
Pombi iyi inoshamisa. Yakanga iri bere rekumisikidza asi iyo yaive isiri mhosva yechigadzirwa ichi. Munoona, vanoti iri DIY-basa iro chero munhu anogona kuita asi ivo zvakare havataure kuti nyanzvi dzinogona kunge dzakaisa pombi pakutanga.
Zvakatora mazuva matatu akaputsika ekupika uye kubvarura kwandiri kuti ndibatanidze pombi yekare uye ndikwanise kuibvisa uye kubvisa pasink. Zano rakanakisa randinogona kutaura ndere chokwadi chekuisa mutengo webhesheni wrench mune iri basa. Iyo yakanyorwa sechimwe chinhu "chakanaka kuva nacho" asi icho chinodikanwa. Mune yangu kesi, hapana wrench kana chishandiso chaive chidiki zvakakwana kuti upinde munzvimbo uye kugona kutenderera uye kuzviita nesimba rakaringana kubvisa pombi iyo ingangodaro yaivepo kubvira pakavakwa imba mukutanga kwema3.
Nekudaro, pandakangokwanisa kubvisa zvinhu zvekare, kuiswa kwacho kwainyatsoita mushe. Iwo madhairekitori uye vhidhiyo zvinokutungamira iwe mukati mezvese zvinhu uye iyo yega hiccup yandaive nayo yaive kubata neyekare pombi dzemvura kwandaive nehukama hwakasiyana kupfuura iwo mirairo yakaratidzirwa. Izvo zvakapedzisira zvave zvakanaka, asi ini ndaida kutsvaga uye kuve nechokwadi ndisati ndapera negungwa remvura pasi.
Pombi nyowani yachinja kicheni yangu. Haingotaridzike chete asi bhurocha re "diki" ruzivo rwunowedzera mukuvandudza kukuru kwehupenyu hwangu. Kutanga kubva, ndakatengawo sipo yekuparadzira kuti uende pamwe neizvi. Saka izvo zvinobvisa kudiwa kwemutarisiri asingatarise agere kumashure kwesingi. Uye sezvo "anobata" akavakirwa kumashure kwepombi, inobvisa ese iwo mafundo madiki kuseri kwesingi zvakare. Iye zvino ndine imba isina chinhu ipapo saka inotaridzika kuchenesa uye kusadzikira.
Pamusoro pezvo, sezvo pombi iyi iri refu, ndinogona kufambisa zvirinyore mapani nekucheka mabhodhi nemashiti emakuki pasi payo kuitira kuchenesa kwakakodzera. Nepombi yangu yakare, yakanga yakagadzikwa masendimita matanhatu kumusoro, ndiyo yega mvumo yawaifanira kufambisa zvinhu pasi pemvura izvo zvaizopedzisira zvanyura pakaunda, ini, kana kuseri kwesingi zvisingaite.
Uye zvakare, sezvo mubato uchibviswa ndinogona kuunza mvura kuzvinhu zvikuru pane imwe nzira yakatenderedza iyo inoita kuti kuchenesa kuve nyore. Ndinoona kuti ndinogona kuchinjira kumumvuri wekumwaya ndokuuya nawo chaiko pakakangwa pane chikafu uye chinobva chauya chaipo, uko semasukisi anouya chaiko kana ndikatenderedza kamubhedha kune yekuyerera kurongedza ndokuisimudza kumusoro chaiko kubva muhari.
Tinogona zvakare kutaura kuti yangu yapfuura yekumwafa kamwene yakanga isina kumanikidza zvachose saka zvaive zvisingaite kushandisa. Basa rekupfapfaidza pane izvi rakandizivisa kubwinya kuri kugona kupuruzira zvimwe zvakabikwa pane chikafu pane kuti ndizvikweshe kakawanda.
Zvakare zvakareruka kwazvo kugona "kurova" pombi nefoni yako kuvhura mvura kana maoko ako akasviba pane kuti utendeke bhudhi, geza mawoko, uye wozosuka bhudzi. Saka inovandudza kubika mukicheni mangu zvakanyanya.
Ndakave nemakomendi ayo anotaridzika uye anoshanda senge inodhura modhi, kwandinoziva kuti ndakaitenga nemutengo unonzwisisika. Ndinoda pombi iyi! 5-nyeredzi chigadzirwa. Inoshanda zvikuru, yakauya nezvose zvinodiwa kuiisa, uye yakasimudza izvozvi kweinokwana mwedzi mina uye ini ndichagadzirisa kana ikasaiti. Chinhu chega chisingasviki nechero mhando yeapombi dzemapombi. vazhinji vavo vanokurudzira kushandisa chimwe chinhu kuchengetedza kubatana.
Izvi zvakangonditorera maminetsi gumi kuti ndiise mushure mekunge ndabvisa pombi yangu yekare. Yakanga iri nyore kwazvo kuisa, uye chero bedzi nzvimbo iyo huremu uye hosipaipi inodhonza mubato uri pachena, musoro unodzoka zviri nyore uye zvine mutsindo. Chinhu chimwe chete chandisina kufarira, mifananidzo yese yakaratidza mubato munzvimbo yakatwasuka. Ndakafungidzira kuti mvura inopisa yaive yakatwasuka, uye mvura inotonhorera yakatenderera zvakakwana. Panzvimbo iyoyo, kana yaiswa ine mubato kurudyi, iyo inotonhora mvura iri 10 ° yakanangana neshure uye iyo inopisa mvura iri 45 ° yakanangana nesingi kana mushandisi. Paunenge uchifunga kuti unogona kutenderera pombi saka mubato uri wepakati, zvine musoro kuti mvura inotonhora iri kurudyi uye inopisa mvura kuruboshwe, uye kana iwe waida kuisa mubato kuruboshwe, hazvaizoita zvine musoro kuti mubato utendurwe 45 ° yakananga kumashure (sezvo ingangodaro yaisatokwana). Saka ndakachinja mitsara yemvura inopisa uye inotonhorera kuitira kuti mvura inotonhorera ive 90 ° yakananga kusingi / mushandisi.
Iko kutaridzika kwakanaka, kukwirira / kubvumidzwa pamusoro pekushambidza kwakanaka, sprayer inoshanda zvakanyanya, uye yaive yakanaka kukosha.
Iyo yakasvika ine yakapusa bhokisi, yakapusa bhuku, asi zvese zvakaputirwa zvakachengetedzwa zvakanaka.
Ndakanditorera ingangoita maminetsi gumi kuti ndibvise yekare, kuchenesa nekuisa muchina uyu. Ingoverenga bhuku racho zvishoma, uye bumm… zvaitwa. Sezvauri kuona mumufananidzo wangu, zvinotaridzika sezvakanaka, zvekare, zvakanaka. Zvishoma kureba uye yakakura saizi. Izvo hazvina kuoma zvachose kuisa.
Maturusi maviri aunoda: mapapiro nebheseni kana chimwe chinhu kuti urambe uchinyura pasi. Hongu, mashoma matauro.
Ini ndinoda ivo vakapa mashoma zvigadzirwa - kana iwe uchizvida nekuti yapfuura faucet ine hombe pombi kana chero chinhu. Ingo ita chokwadi chekuisa iyo chaiyo pombi. Vamaka neruvara, girini uye tsvuku. Kunyangwe iwe hauna kumbobvira waisa chinhu ichi, seni. Ingoshandisa commonsense yako kuti tsvuku inopisa uye girini inotonhora. Mushure mekunge zvese zvaiswa. Usakanganwa kuisa huremu.
Kurema kwacho kwakareruka kwandiri. Chenjera, iwe unofanirwa kuisa huremu kurudyi. Zvikasadaro hazvishande. Chinhu ichi, iwe ungatofanira kudhonza uye kusundira pombi uye iwe ukaona kuti ndeipi iri kumusoro uye pasi - isa uremu ipapo.
Mukupfupisa, pombi inotengwa, mhando yakanaka, simbi - kwete epurasitiki yakachipa. Kutsiga mushure mekuiswa. Yakasvika iine huwandu hwakawanda hwaungangoda. Zviri nyore kuisa uye ini ndinokurudzira iwe kuti utenge izvi nekuti zvinouya neaka5 makore garandi.
Yakagadziridzwa mushure memavhiki mashoma: isu tinochida chaizvo. Kushamisika, Unogona kugadzirisa kureba kwepombi. Yaa kana usingade kurebesa, isa uremu hwakati kwirei.
Inotaridzika zvirinani pane yangu yapfuura. Iyi inoenderana neyangu setup yazvino zvirinani. Zviri nyore kwazvo kuisa. Ini ndakasanganisira vhidhiyo yekumisikidza kuiswa. Yakanga iri nguva yangu yekutanga kuisa pombi yemukicheni uye nekutenda kune WOWOW. Vakaita kuti zvive nyore kwazvo kune anotanga. Kurema kwacho kuri nani pane yangu yapfuura. Iyo inorema uye iyo yekuwedzera inodhonzera kumashure munzira yese. Yangu yakare haina kudududza nzira yese. Kuyerera kwemvura kwakatsetseka uye kunogara kuripo. Ini handizive nezve plastiki zvakadaro. Parizvino, ini handina kana nyaya asi handikwanise kutaura zvichaitika mukufamba kwenguva. Ndinovimba zvichave zvakanaka. Kana iwe uchitsvaga wekutsiva, tarisa kunze. Iyo zvakare ine akawanda ekuwedzera mativi akaisirwa mune kana iwe ukaada ivo gare gare.
Iyi ipombi yemhando yepamusoro. Yakakura kukwana uye kupedzisa uye kuvaka kwakasimba. Iwe unogona nyore kubhadhara kaviri mutengo uye zvakadaro iyi WOWOW tepi ingave yakakosha kukosha. Kuisirwa kwaive nyore zvakakwana sezvo zvikamu zvakapihwa zvaive zvakaenzana mhando. Iko hakuna chinhu chakasarudzika pamusoro peizvi.
Yangu yekicheni fafitera sill inogara pasi uye inotambanudzira zvishoma pamusoro pesingi, izvo zvinoita kukodzera yakanaka, hombe pombi kumberi inonyengera. Nekudaro, iyo yepasi chikamu neiyo lever inokwana zvakakwana pasi pechidzitiro. Mutumbi mukuru wechigadziko unogara pamusoro pechiso cheplate matanho anosvika 1.8 "uye mutsipa unokwana mukati mehwaro hwepombi iri approx 1" dhayamita (zviyero zvangu zviri approx, ndapota tarisa kuhupamhi chaihwo muchinhu. tsananguro).
Kumwe kufunga kweavo vanogona kunge vaine hwindo sill clearance nyaya, ndeyekuti hwaro uine lever inogona kutenderedzwa kumberi panguva yekumisikidza. Saka, pachinzvimbo chemubati agere kurudyi kwepombi (iyo kwandiri yaisashanda nekuti lever yaisazobvisa hwindo, unogona kutenderedza base 90 degrees! Sezvauri kuona mumufananidzo, danho iri kumberi kwepombi, iyo yandinowana basa zvakakwana.
Saka zvakazara, ini ndinopa iyi WOWOW pombi 5 yehunhu uye dhizaini. Ini ndanga ndisingazive nezveWOWOW brand ndisati ndatenga iyi kutenga. Iye zvino zvandakaisa imwe ndinonzwa ndine chivimbo mukuikurudzira. Ndinoziva kuti ndichatenga chigadzirwa ichi zvakare.
Ndiri kufara kwazvo kuti ndakatenga pombi iyi! Yakanga iri yakapusa kuisa, yakaitwa kurira uye inonzwa yakasimba.
Handisati ndamboisa muhupenyu hwangu hweti nyowani yekicheni pamberi uye nekutaura chokwadi ndakazvimisikidza kwechinguva chidiki ndichitarisira kuti ndinogona kuyamwa mumwe munhu kuti azviitire ini, hahaha. Ini ndakazofunga kupfeka bhurugwa rangu remusikana uye ndichiyedza uye mukomana ndinofara here zvandakaita, yaive mhepo! Ndichitora pombi yangu yakare iyo yakauya neimba yandakatenga yainge yakaoma chaizvo, yakanga yazara mukati uye kungorwadza mumutsipa kushanda wrench munzvimbo yakasimba kudaro. Akatora hora yakasimba kuti abudise benzi.
Ikozvino kuisa iyoowow Imwe Handle Yakakwirira Arch pombi yaive chaiyo ZVAKANAKA SIMPLE. Ndakanga ndazviita mumaminitsi asingasviki gumi. Iwo iwo mirairo kune iyo poindi uye nyore kutevera. Kana iwe uchimisikidza ZVAKANAKA kuti miraidzo yacho inoverengwa sei, pombi yacho inoshanda FLAWLESSLY.
Handina kumbofarira pombi yemuchina yakasarudzika inouya mudzimba dzese. Iyo yakaderera, haina sarudzo, uye dzimwe nguva inogona kuve yakaoma kana uchibata nekumanikidza kwemvura kana tembiricha. Asi pfungwa yekuchinja imwe kunze yakandityisa zvishoma sezvo ndisati ndambozviita. Asi nekutengesa kuchangobva kuitika, ndakafunga kuzvipa uye ndinofara.
Kuiswa kwanga kusiri kuoma zvachose. Bvisa hunhu pasi pesingi, tora chipanera kuti usunungure mabhaudhi, uye tora chekutanga ubvise chitsva sekurairwa. Hapana maturusi akakosha anodikanwa, hapana tepi kana glue, kana chero chinhu chinowedzera.
Ini ndinoda iyo yakakwirira arc yemutsipa pombi pombi uye kurerukirwa kwekutenderedza mvura nekudzima kana kupisa uye kutonhora neine lever kumusoro kumberi (ini ndakagadzirisa ndokuitenderedza kumusoro kumeso kumberi kumberi kwerutivi). Uye kugona kubvisa musoro kubva pombi uye kuushandisa sepombi inowedzerwa ihope. Kune kana bhatani ipapo kuti uende kune maviri akasiyana modhi, ipfupi kana yakasarudzika pfapfaidzo, pamwe nekabhatani kadiki kuti umbomisa mvura kana uchizoida.
Nyatsonakidzwa nechigadzirwa ichi uye unofara kwazvo nacho.
Hausati wave kushandisa refu. Ndichagadzirisa kana zvichidikanwa. Bhegi raive rangoiswa nhasi ne new sink sink. Anoda anotaridzika uye hunhu hwese hunoratidzika kunge hwakanaka. Pombi yangu akandiudza kuti mazhinji eaya mapombi eChina anogovana zvikamu zvakafanana nemazita emhando uye hunhu hwakangonaka. Akataura zvakare kuti mazhinji acho anozopedzisira atsiviwa mushure memakore mashanu. Kunyangwe mazita ezita. Asi pamutengo unoratidzika zvinotyisa uye unoratidzika kunge unoshanda. Ndiri kufara nemutengo uye ini ndingati chiipe!
Bhizimusi rangu rekutenga rakatenga matanhatu acho ekumutsiridza muzvikamu zvitanhatu uye ese anotaridzika. Ivo vari nyore kwazvo kumisikidza uye vangu vontrakita vanovada kubva pakuonekwa kusvika pahunhu.
Parizvino chete chete akaputsa mushure memwedzi mishanu yekushandiswa nemhuri ye1 (vana vana). Ini ndakatumira tsamba yavo sewaranti seyakapihwa kubva pawebhusaiti sales@wowowfaucet.com uye vakapindura mukati memaawa matanhatu uye vakamhanyisa-kutumira nyowani sekutsiva. Ndakagamuchira iyo nyowani mumazuva mana. Zvakanaka, icho chiitiko chinoshamisa chevatengi. Ndatenda!
Handigoni kutenda kuti ndakazviita! Handisati ndamboita chero chinhu chakadai. Kuisa pombi !! Ini ndaifunga ichi chinhu chaunobhadhara mumwe munhu kuti aite! Zvisinei, mutengi wevashandi akandiudza kuti ndinogona kungotarisa vhidhiyo yacho ndozviita ndega uye… chii chaunoziva? VAKANGA VAKARURAMA !! Ndingati ndaive nenguva yakaoma kubvisa rangu rekare. Sezvo WOWOW yakaita poindi yekurerutsa uye kunyora zvese. Icho chinenge chisingaite brainer pane izvo zvinoenda kupi! Ivo vakatogadzira kumisikidza iyo facet nyore neiyo imwe huru sikuru mhete. Ini ndinotenda handina kushandisa zvimwe zvishandiso ipapo maoko angu asina maoko kuisa. Chinhu chega chandaida rubatsiro ndechekuti mumwe munhu abate bhegi rakatwasuka pandinomesa sikuruwa. Nekudaro, iwe unogona kukwanisa kuzviita iwe wega wega. Zvinogona kungotora nguva yakati rebei. Asi ini ndinofunga zvinogoneka.
Mune yedu imba yapfuura, isu takaiswa mapaipi eDelta, saka takatoparadzwa. Patakaenda mumba medu, sink yemukicheni yaive nepombi pfupi yakapfava, saka mushure memwedzi mishoma yekutambudzika nayo, ndakatanga kutsvaga pombi yepamusoro. Ini ndanga ndichitarisa kwakakwirira kumagumo emhando, asi ini ndanga ndisingade kuburitsa madhora mazana maviri nemaviri + pombi iyo ingangozotsiviwa patinogadziridza. Ndakasangana newowow faucet uye ndakashamiswa nenhamba yeongororo dzakanaka. Yakareba nyaya pfupi - yakatenga pombi. Yakasvika mubhokisi rakashambidzika uye rine hunyanzvi rine zvinhu zvakasiyana zvakatemwa kuita Styrofoam nhema. Kuiswa kweWOWOW faucet kwakatora isingasviki gumi mins, kusanganisira kubviswa kwepombi yekare. Chidimbu ichi chinotaridzika kunge chakatsetseka, chepamusoro-kumagumo uye chinoshanda zvakanakisa. Dai yaive ye200 mavhiki - hapana zvichemo. Yakanakisa kumanikidzwa kwemvura, yakanakisa uye inoteerera hosipaipi ... zvakanyanya kukosha HAPANA ZVINOBVUZA Saka ini ndinokurudzira zvikuru (ndinovimba ichamira muyedzo wenguva).
Isu tave tiri mumba medu kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu, saka iyi ingangoita seti yechina yemapombi ekicheni isu tatsiva. Kuiswa kwacho kwakafamba mushe uye ini ndaifarira chokwadi chekuti mitsara yekupa yakauya yakatosungirirwa saka ndaisafanirwa kushandisa mitsara yangu iripo, pamwe nemutengo wacho waive wakadzikira kupfuura mapombi maviri ekupedzisira atakaisa. Isu takatsiva zita remhando yekicheni mapombi atakavenga kubva pazuva rekutanga nekuti pakange pasina kumanikidza uye pasina vhoriyamu, mvura yakabuda mupombi mune rukova rusina kusimba; uchinetseka kupfura iyo, skrini, diffuser, mavhavha uye mitsara yekupa, rwizi rusina kusimba rwakakonzerwa nepombi yemakore maviri. Yakawanda yekumanikidza uye nemvura ine WOWOW pombi uye tinoda chokwadi chekuti mabasa ese anoitwa kubva kunzvimbo imwechete.
Faucet iyi yakanaka pamutengo uye mashandiro ayo. Iyo yakasimba kwazvo, yakasimba, inoshanda uye yakashongedzwa pombi. Ini ndaida chaizvo pombi ine chipfapfaidzo mukati mayo uye ndinofara kuti Ine chinodzoresa chinodzora uye chinoshanda chaizvo. Pane huremu hunouya nepombi iyi yekumisikidza pazasi kuti chipfapfaidzo chidzokere pachinzvimbo chacho nemazvo. Chimwe chinhu chakanakisa ndechekuti hairatidzi kupurindwa kwemunwe saka inotaridzika kunge yakachena. Zviri nyore kuisa pombi iyi uye kunyangwe munhu ane hunyanzvi anogona kuiisa muAawa kana zvakadaro. Ndiri kufara nekutenga kwangu uye ndinokurudzira vamwe zvakare.
WOW !! Chisingatendeseke chigadzirwa chemari, chakachiisa mumaminitsi makumi maviri. Wakaona ese mashanu nyeredzi ongororo asi aive achizeza nezve kutenga. Kufunga kana ndaisazvida ndaizozvidzosera. Yakarairwa iyo uye haigoni kutenda mhando. Kana iwe uchitsvaga iyo nyowani kicheni pombi asi isina kutsvaga kushandisa mazana matatu kana kupfuura iyi NDIYO BHUKU RINODA KUTI WANNA TENGE !!!! Haugone kuve unofara nekutenga uku! Pombi ini ndakatsiva, ndakabhadhara 20 makore 5 apfuura, iyi iri yega yega yakanaka seyayo !! Iwe haufari nekuodzwa mwoyo neiyi !!!
Uku kukosha kunoshamisa. Bhegi iri rakatsiva rimwe raimbodhura zvakapetwa kana uye zviri nani mhando. Ini handikwanise kutanga kukuudza kuti izvi zvinonakidza sei. Yakanyatsogadzirwa!
Mwedzi yakati gare gare; sezvazvinoitika, ndiri OK mainjiniya.
Ini ndanga ndichinetseka kuti yaizodonhedza kumusoro kwekubatanidza. Hazvina kudaro. Ichi chigadzirwa chakasimba
~ mwedzi miviri gare gare, ichi ichiri chigadzirwa chinonakidza kwazvo. Ini ndiri mainjiniya, ndaishushikana nezve iyo pivot poindi yemusoro. Haidonhedzi zvachose. Zvakadaro, ini ndinokurudzira ichi chikamu zvakanyanya
Pave neinenge vhiki kubva pandakaisa iyi WOWOW kicheni pombi uye kusvika parizvino ndakafadzwa nehunhu. Iyo yekumisikidza yaive mhepo (yakangonditorera ingangoita maminetsi gumi neshanu) uye zvese zvaidikanwa (kusara mapapiro) zvakauya nekutakura. Kana paizove nekumwe kudonha, mabhiza akasungirirwa kubva pombi yekupedzisira saka kana rimwe rawo rikatanga kudonha nekuda kwechimwe chikonzero, ini ndinofanira kupedzisira ndatsiva pombi yese. Izvo zvakati, ini handione chero kudonha, iko kumanikidza kwemvura kwakakura, pamwe nechengetedzo yetembiricha. Kusvika ikozvino izvi zvakachipa zvikuru kana zvichienzaniswa nemapombi anodhura andingawana muzvitoro zvemuno zvemahara. Ini handisi nyanzvi yeplumber asi kwandiri, ichi chigadzirwa chinotaridzika uye chinonzwa senge $ 15 inodhura iyo yakatsiva. Kana ikandipa yakanaka makore 200-4 (zvinova zvakapihwa newangu wekupedzisira), ndinofunga ndingafare. Kukosha kwakanaka kwemari.
Ndakaisa faucet iri mukicheni mune ingangoita makumi matatu min, yakawanda yacho yaipedza kukochekera marara emvura. Dambudziko chete randaive naro nderepaipi rangu rekare iro raisazobuda kubva pakasimbiswa kushinga kwaive kwaparara. Asi, iro raive risiri dambudziko hombe kwandiri iro raigutsa kushandisa.
Chigadzirwa chakauya zvakapetwa kaviri-bhokisi uye chakaunzwa musina kana chinhanho. Zvese zvikamu zvaivepo uye kadhi rekuraira rakanga rakajeka kunyangwe ini ndisina kurishandisa zvakanyanya (chinhu chemurume). Rukova rwemvura rwakanaka kwazvo uye hapana mabudiro zvachose. Ini ndakanakidzwawo nekumaka pamutsetse wemvura mukuru wehuremu hunobatsira kudzosera pombi yemvura. Izvo zvinhu zvidiki seizvi zvinomhanyisa kumisikidza uye zvinodzivirira matambudziko emangwana. Ini zvakare ndainakidzwa neplastiki inosunga nati iyo inokwana ruoko rwese uye zviri nyore kwazvo kukwenya pasina maturusi anodikanwa.
Ini ndanga ndaraira iyi tepi kutsiva Peerless pombi yandakange ndatenga muWalmart makore maviri apfuura .Pombi isina Peerless yaityisa kuti yakabuda mushure memwedzi yakati wandei uye mushure mekutsiva zvikamu pasi pewarandi yaive ichine matambudziko. Bhegi iri rinoshanda chaizvo sezvakatsanangurwa uye rinotaridzika kunge rakanaka mukadzi wangu anochida.Ndakatofanira kutsiva vharuvhu nyowani yekuisa iyo yakanditorera maawa maviri. Kushanda pasi pechando chekicheni harisi basa rinonakidza kwete yakawanda nzvimbo yekushandira asi zvaitwa uye ndinofara zvikuru nezvabuda.Ndingakurudzira chigadzirwa ichi.
Uku ndiko kwaigona kunge kuchinjisa mutambo wangu wekunyura mune ino imba yandakatenga makore matatu apfuura. Pombi yekare yaidonha ichimwaya mvura ichibva pamusoro pandaizoibatidza.
Ndakafunga kutora pombi iyi, uye ndinofara chaizvo kuti ndakaitora. Zvakanditorera maminetsi makumi maviri kuti ndiise uye zvaive nyore. Kushandisa maturusi ekutanga, uye kuve nechokwadi chekuti zvese zvaive mugwara.
Kurema kunowedzerwa pahosi kwakakura nekuti pombi yekupfapfaidza inobuda uye inokutendera kuti usase chero chinhu. Ini ndinoda kuti inochinjika.
Iyo yekupedzisira yakanaka chaizvo, yakasimba mhando.
Ndiri kufara kwazvo kuti ndakaita iyi sarudzo yekuichinja.
Ndakafunga kutora pombi iyi kuti mwanasikana wangu ave nayo mufurati (pane yedu imba) sezvo pombi yake yekare yaive yakaderera modhiyo uye mvura inopisa yakanga yamira kushanda pairi. Ini ndanga ndisingade kushandisa mari yakawanda senge ndakaita pabepa rangu rekudonha-pasi, asi ndaida chimwe chinhu chinoshanda nemazvo uye chaanofara nacho. Mushure mekuverenga wongororo pabepa iri, ndakafunga kutora mukana nazvo kunyangwe ndakanga ndisati ndambonzwa nezve iyi kambani, wowow. Ndiri kufara chaizvo kuti ndakazviita!
Mutengo wepombi iyi, sezvauri kuona, uri nani kwazvo kupfuura makwikwi akaiswa nemazita makuru emhando. Pombi yaive nyore kuti ndiise, kunyangwe yaive nguva yekutanga yandakange ndamboisa pombi. (Ini ndinowanzo siya basa iri kumurume wangu.) Chinhu chakaomesesa kuisa muviri wangu wakakora pasi pesink nekubvisa pombi yakare. wowow yaive neiyi faucet yakarongedzwa huru uye zvese zvakamisikidzwa kuti igone kuiswa nyore uye iine mashoma maturusi anodiwa.
Mwanasikana wangu anofara nebhegi rake nyowani uye akataura kakawanda pamusoro pekuti "zvinonakidza" sei kusuka ndiro dzake izvozvi. Iyo faucet inoshanda zvinoshamisa uye inofadza kwazvo ziso. Zvese zvinoshanda zvakanaka pasina kuvuza kana matambudziko mushure mekumisikidzwa. Ndatenda, wowow, nekuita kuti mukadzi uyu anzwe zvakanaka nezvake!
Chakatanga kundifadza yaive nzira iyo zvidimbu zvaive zvakarongedzwa mubhokisi. Chidimbu chimwe nechimwe chaidzivirirwa nefuro dema repurasitiki. Chidimbu cheplate chidimbu (chinoshandiswa pamatombo matatu emakomba) chakauya mune yayo nhema jira kesi. Kuisirwa kwaive nyore nyore kumurume wangu. Akaisa faucets kumberi, asi huremu hutema hwaishandiswa pakudhonzera pasi sprayer zvaive zvakati siyanei naye. Ndakaita kuti atarise mavhidhiyo asati atanga kumupa pfungwa yezvaida kuitwa. Sezvinoratidzwa muvhidhiyo, haana kusimbisa gasket zvakanyanya. Anonzwa kuti akaisimbisa zvakakwana. Changu chandinetsa ndechekuti pombi yakafamba zvishoma painobatwa asi hapana chekunyanya kunetseka nezvayo. Murume wangu, uyo anowanzo kuwana mhosva muzvinhu zvandinotenga, haana zvichemo pombi. Akapomera kufamba pamusoro pekutetepa kwesimbi yedu isina simbi yekunyura kwete pane pombi uye akagadzirisa dambudziko nekuisa bhodhi diki pasi pesinki kuti riwedzerwe rutsigiro. Hazvina kana kufamba zvachose izvozvi. Ini ndashandisa sprayer yakawanda nguva pfupi yapfuura mushure mekumisikidza uye ndikapa simbi yangu yesimbi isina tsvina yekuchenesa kwakanaka. Zvakanaka kuva ne sprayer nekuti taifanirwa kusiya yedu yepasi sprayer chirimo ichi patakaiswa yekunwa mvura system. Iwe unogona kuita sekuzviona kurudyi kwemufananidzo wekupedzisira. Pakava sarudzo yemvura yekunwa pombi mugomba kutsiva sprayer, kana kuisirwa pombi yemvura yekunwa kumwe kunhu, ndakasarudza kutsiva chipfapfaidzo. Kunyangwe isu tisingashandise sprayer zvakanyanya, pane dzimwe nguva pandakapotsa. Pombi yekicheni inoenderana nemvura yekunwa, uye ndinovada vese. Isu pakutanga hatina kukwanisa kutora bhatani pamusoro wemusoro wekusprayer uyo unofungidzirwa kumbomira pfapfaidzo kuti ushande, asi unoshanda izvozvi. Pakazara, ini parizvino ndinoda zvese nezve iyo WOWOW kicheni pombi - iyo kutaridzika kwayo, iyo yemakore mashanu warandi, maitiro ayo anoenderana nezvatinoda, uye kunyanya kune wese mutengo.
Ndinoda pombi iyi. Hafu yemutengo wemazita mazhinji emhando iwe uchaona muzvitoro uye zvakangogadzirwawo. Kuisirwa kwaive kupusa zvakare! Paingova nezvinhu zviviri chete zvakaoma nezve pombi iyi. Chekutanga kwaive kugutsa mukadzi kuti atore asina kuchiona pakutanga mumunhu uye chechipiri kwaive kuburitsa pombi yekare. Damn munhu akagadzira zvinyakare zvepurasitiki. Pro tip, kana iwe uine izvo uye usingakwanise kuzvibvisa chengetera iwe nguva nekuedza kusaenda kupi uye ingo kurasa kunze iwe unochera uye hukuru hwekuboora. Kana iwe uri kuverenga izvi iwe wanga wakaita seni. Iwe unoda kuve nechokwadi kuti uri kuwana yakanaka pombi, asi vimba neni uye nezvimwe zvese zvakanaka ongororo. Iyi ipombi huru uye yakanaka dhizaini!
Ndinoda kupedzisa asi chiri chakareruka kupfuura zvandaitarisira. Ini ndaive nechiratidzo chakakurumbira chaive chakafanana asi chairema. Parizvino, iri kushanda sekutarisirwa. Zvinotoshamisa kuti huremu hwekudzosa dhonza pasi hosipa rinorema zvekuti rinozvidhonza pasina rubatsiro; uye izvozvo zvakanaka. Sezvo ini ndakabata ruoko rwerudyi, ndakachinjanisa mitsara yemvura inopisa uye inotonhorera kuitira kuti ndikweve mubato kumberi kwemvura inotonhorera uye ndokusundira kumashure kune inopisa sezvo mvura inotonhorera ichizoshandiswa kazhinji (nyanzvi yemapombi inotaura kuti yakaiswa zvisizvo asi ndingadai ndakashandura mitsara yemvura pamberi pekumisikidza). Ndakaverenga wongororo dzevamwe vatengi vane nyaya asi ndomirira ndoona.
Kunyangwe iyo yakagadzirirwa kuisa nyore, imwe isina kunaka dhizaini ndiyo clasp pane inodzoserwa huremu. Mumwe anofanirwa kungwarira chaizvo paanovhura kuti aisungirire pahose. Hazvisi nyore kuvhura sezvazvinoratidzika; saka kana ikasaitwa nemazvo uye ikakuvara, haichakwanise kuvhara isina kushandisa hosipaipi yekukochekera.
Iyi ipombi huru! Kupedzisa kwakanaka, asi zvinonyanya kukosha ndiyo nzira iyo inoshanda chaizvo. Ndanga ndichiishandisa kwemwedzi mishoma, uye musoro uchiri kubaya zvisingaiti kudzoka mubati mushure mekunge waidhonza. Iyo kona yefaucet yakanaka uye yakakwira, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchenesa yakawedzera hari hombe nemapani. Kuyerera kwemvura zvakare kuri nyore kwazvo kudzora, Tinoida! Yakakurudzirwa!
Pfungwa yangu yekutanga yaive, inotaridzika zvakanaka pawebhusaiti asi haigone kuve yemhando yepamusoro. Ini ndaive ndakanganisa, ndakabva ndangofadzwa nekurema uye kunzwa. Inorema kwazvo yakasimba kuvaka. Iyo inotouya nemaadapter uye nekuwedzera mvura skrini. Kukosha kwakawanda…
Kuisirwa yaive mhepo. Yakateedzera nhanho nhanho mifananidzo uye ndokupedza mumaminetsi gumi nemashanu, kusanganisira kubviswa kwepombi yekare. Iyo hombe nati yekusimbisa iyo unit kune iyo dounter yaive yakanaka. Iwe unogona kuwana chaiyo chaiyo kubata uye sunga zviri nyore.
Iyo yekuyerera mwero wakanaka, ini ndinoda iyo yekumwaya ficha sezvo iri yakatetepa kupfuura yakawanda saka hapana imwe yekuwedzera kupenya .. Iko kutaridzika kwakanaka, vanhu vanofunga kuti iwe wakashandisa $ 100 kupfuura zvawakaita iwe.
Ichi chinhu kuwedzera kwakanaka kune yangu nyowani SS yekunyura mune yangu yekushandisa kamuri. Ndakaita pre-kuisa yekuongorora, sekutaura kwevamwe, uye handina kuwana nyaya dzeQC isati yaiswa. Ini ndakaisa izvi pasink nyowani, saka ndakazviita apo singi yaive iri panze, izvo zvandine chokwadi chekubatsira. Iyo yekumisikidza michina yakashanda mushe, asi iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unogona kusvika pairi. Iyo inogona kunge iri yakawanda nyaya kana ukatadza kufambisa sink. Bhegi rinoshanda zvakanaka mushure mekumisikidzwa; ine yakanaka kunzwa uye haina kudonha zvachose. Ndiri kufara kwazvo neyuniti iyi zvekuti ndinenge ndichitenga imwe kutsiva pombi iri mukicheni!
Isu takaiswa pombi ino mukicheni yedu kweinenge vhiki. Mushure mekuve neyese yekudzikisira mvura mvura ine alkaline pombi yemvura yakaiswa ini ndakakurumidza kuona kuti ndaida sprayer, iyo iyo alkaline spout yakabvisa. Isu takaraira izvi nekuti mutengo waive nani kupfuura vakwikwidzi uye zvaiita kunge zvaizoita nei isu tichida. Ini ndaisatarisira yakanaka mhando pombi yemutengo wandakabhadhara. Ndakaverenga wongororo zhinji dzichinyunyuta kuti pombi haina magineti kana haina kudzvanya munzvimbo. Ndizvozvo chaizvo inorema sisitimu iyo inokwevera iyo yekumwaya kudzosera munzvimbo yayo mushure mekushandisa. Parizvino ndinochida uye handina zvichemo. Inosimbisa zvakanaka kana isiri kushandiswa uyezve inotaridzika inokwezva mukicheni mangu. Ini zvechokwadi ndaikurudzira kune chero munhu anoda faucet yakanaka pasina kutyora bhangi kuti azviite.
Pombi iyi inoshamisa chose. Iyo inonakidza pombi yemutengo, uye inotaridzika kunge yakangonaka semapombi epamusoro emadhora kunze uko. Iyo yekumisikidza haina kushata zvachose, asi yangu yega nyaya ndeyekuti ini handina nzvimbo yakawanda pasi pesink yangu yekushanda nayo. Zvakatora nguva yakareba kupfuura zvandaida, asi dai ndaive nenzvimbo yakakwana pasi pesink yangu, iyi ingadai yakave mhepo !! Iyo tepi yakanaka kwazvo, uye iyo yakavakirwa mu sprayer yakanaka !! Ndakaona zvakare kuti kumanikidzwa kwemvura kuri nani kwazvo kupfuura pombi yangu yapfuura yaive kushamisika kwakanaka. Kana iwe uri kufunga nezve kutenga izvi, asi iwe usina chokwadi, ini ndingakurudzira kuenda nazvo. Ini ndaive ndisina chokwadi pakutanga nekuti zvaive zvichiri zvakati wandei pane zvandaida kubhadhara, asi ndakazvienzanisa nevamwe, uye ini ndaisakwanisa kubhadhara $ 100 + yemamodeli akafanana kubva kune mamwe mabhuru. $ 90 yeiyi yainyatso kukoshesa mumaonero angu. Bhegi iri rinotyisa !!
Iyi ndiyo tepu inonakidza kwazvo yandakambotenga nekuisa. Iyo mainjiniya kuseri kweiyi yekuisa maitiro inoshamisa. Pane imwe nguva pandakabvisa pombi yangu yakare (iyo yanga yakaoma) zvakanditorera maminetsi gumi kuti ndiise ino WOWOW kicheni pombi. Uye zvakare chinoshamisa ndechekuti iwe unogona kuisa yekushandisa mubato chero kwaunoda iwe, kuruboshwe, kurudyi kana pakati nepakati chero nguva mushure mekumisikidzwa. Edza izvozvo nemamwe mapombi. Handikwanise kunyatsofara. Kukosha kukuru uye chimiro kubhoti.
Kutaura chokwadi - handina kumbonzwa nezveowow ndisati ndatenga pombi iyi. Ndakawana chinhu ichi zvichibva pakuongorora uye ndakasarudza pachiri sechipo chezororo chemukicheni yemhuri - chakawana chakakodzera madhora makumi masere akabhadharwa.
Yakakwana here - Kwete - yakabva yavandudza hunhu uye mashandiro pane izvo zvavaive nazvo mukicheni yavo - Hongu. Ndingatenge zvakare kana kukurudzira - Hongu.
Chinhu chakashambadzwa ne "kuisa pasi pemaminitsi makumi matatu," izvo zvandinobvuma kuti ndizvo chaizvo. Zvakanditorera nguva kubvisa bhegi repombi rekare, asi zvese pamwe basa racho rakaitwa mune isingasviki awa.
Ndine chekuzeza pazvinhu zvepurasitiki, zvinosanganisira iyo hosi kuyera uye kukwira, asi zvese zvakaenda pamwechete zviri nyore uye zvinoshanda kusvika parizvino.
Sezvo ndangoshandisa iyo kwevhiki - ini ndichaenderera mberi ndichicherekedza kuburitswa kwakataurwa - asi nekushandisa kwakanyanya kurema kusvika zvino - hapana chakaonekwa.
Chinhu chakanyanya kunaka kubva apa, yaive nemutengo wakaderera uye nyore kwekumisikidza - uye nenhengo yemhuri yangu ichibatsira nekumisikidza (ivo vakaverengera kwemwedzi pakutenga pombi nyowani) - vane chivimbo, kana paine chinokanganisika - ivo vanonzwisisa mafambiro akaita izvi pamwe uye vanozoziva zvekutarisira mune ramangwana
Ndakatenga pombi iyi yeimba yedu yekare makore mana apfuura, uye chaive chinhu chakanakisa kwatiri. Yakashanda zvikuru, yakatarisa zvikuru, uye yakanga yakananga kuisa. Patakatama zhizha rino, ndakaedza kuda pombi yemukicheni mune yedu imba nyowani, asi kunyangwe yaive zita raizivikanwa zvakanyanya, haina kungoenzanisa. Ndakafara kuwana iyo yakafanana faucet ichiripo, ndokuiisa iyo payakangosvika. Iko kunakidzwa kushandisa, uye ini ndinoikurudzira zvakanyanya.
Ini ndichangotenga pombi iyi saka ndiri kuongorora mhando yechigadzirwa kunze kwebhokisi uye negadziriro yekumisikidza. Pave nemakore akati wandei kubvira ndaisa pombi yemukicheni. Nguva yekupedzisira pandakaisa imwe yaive nekora yakamonerera pazasi pebhegi ine 2 screws mukora iyo iwe yaunosimbisa pasi ne screwdriver yekusimbisa pasi pombi panzvimbo. Bhegi iri rine kora yeruoko inosunga pasi pompombi uye ini ndakaona zviri nyore kupfuura nzira yekugwinha. Ini ndakaisa yebhuruu yekukiya tambo yekukiya kuti ndione kuti haina kubuda nekuti ndaive nayo. Handifunge kuti zvakafanira asi pombi yakare yakasununguka ndosaka yanga ichitsiviwa.
Kunze kwebhokisi chigadzirwa chakasimba chaizvo uye chinoratidzika kunge chakavakwa zvakanaka. Mushure mekumisikidza uye kuyedza yakanzwa yakanyatsoiswa pamwe uye rwizi rwemvura rwakanga rwakasimba. Kana yadzimwa ndeyechokwadi uye hapana madrip aibuda mairi. Chimwe chinhu chandaifarira ndechekuti kubatana kunopisa uye kunotonhorera kwemvura kunze kwebhokisi kwaive kwakaringana kumonera chaiko kunzvimbo dzemvura. Munguva yakapfuura ndakafanirwa kushandisa zvekare tubing kuti ndibatanidze kune pfupi kubatana pasi pesingi. Kuisirwa kwese kwakatora maminetsi makumi matatu, kusasanganisira kutora pombi yekare. Iine garandi yemakore mashanu uye yemari iri pasi pe $ 30 kana izvi zvichitora makore mashanu uye zvichida kutsiva ndingangotenga imwe yechiratidzo chimwe chete.
Ndakatenga pombi yangu gore rakapfuura uye hongu yakatanga kuve nekadonhwe kadiki kubva mubato (katuriji) mushure mekuve muzuva kwegore (ndinorishandisa pabhodhi rangu rekunze reBBQ). Ini ndakangobata WOWOW uye ivo vakamhanyisa ini cartridge nyowani (zvakangotora mazuva mashanu chete kubva kuChina!). Kwete ivo chete vakanditumira katuriji, ivo vakatumira chishandiso chekubvisa iyo katuriji, mhete nyowani yekuchengeta, Allen set screw, an Allen wrench uye uye nyowani inopisa / inotonhorera bhatani (tsvuku / bhuruu) kuvhara gomba iwe pinda iyo Allen screw pane yekubata. Ndiri kontrakta ane mapaipi ane rezinesi saka zvakanditorera isingasviki maminetsi mashanu kuti ndichinjanise iyo cartridge. SUPER EASY! Ini ndinowanzo gadza mapombi ekupedzisira, mamwe acho ane nyaya futi. Nezve mutengo wemutengo pombi iyi inotyisa. Ehe, ini ndaive nenyaya, asi ivo vakawedzera ndokuigadzirisa! Ini zvechokwadi ndaizotenga pombi iyi zvakare!
Kununurwa mumwe manheru. Akatora bhegi rekare ndokuritsiva neiri apa mudzimai wangu achibika kudya kwemanheru. Hongu zviri nyore kudaro. Ini handisi pombi chete murume wenguva dzose. Zvino kana usiri kugona kutenderedza imba zvinokutorera nguva yakati rebei asi kana iwe uine pfungwa yakajairika ingo svetukira imomo. Chinhu ichi chakaiswa mubhokisi kunge chaiita miriyoni yemadhora. Iyo yekupedzisira yaive yakanaka uye inoshanda inonakidza. Mumwe munhu akataura kuti yavo yaive nedrip kana inodonha wher iyo fekitori hoses inosungirirwa pombi. Ini ndinosimbisa7kusimudza zvishoma. "Dont" pamusoro sungisa ivo kana iwe uchave nematambudziko. Iwe unogona kutenderedza mubato uchitenderedza kune chero nzira yaunoda, kuruboshwe, pakati kana kurudyi. Tinochida. Ini ndaizotenga imwe. Nei uchibhadhara $ 300.00 yeiyi. Chengeta mapepa ako ese uye zvimwe zvikamu. Ndakaverenga mishumo yakati wandei nezvehukuru hwebasa. Nakidzwa. Nakidzwa.
Chikonzero chega chandakaipa 4 nyeredzi chiyero ndechekuti ini ndakangoisa chete. Ini ndinogona kukwidziridza kana kudzikisira pandinoishandisa. Kufanana nevazhinji, ini ndinogara ndiri munhu anofungidzirwa pandinoona mutengo wakadai - unowana chaunobhadhara iwe, handiti? Ndinofanira kutaura kuti kusvika parizvino ndakanakidzwa. Mukadzi mumwechete akaisa izvi nekukurumidza. Mirayiridzo yakajeka. Ini ndinogara ndichishandisa plumbers tepi pane tambo. Iyo yakanaka chaizvo inotaridzika pombi uye inoita chaizvo zvandinoda kuti iite uye ndinoida. Uye ... ..chitsva saka tichaona mashandiro azvo nekufamba kwenguva. Ive neshuwa yekunyoresa makore mashanu warandi pane yavo webhusaiti. Haufanire kutenga yekuwedzera chigadzirwa inishuwarenzi… .. sezvandakaita. Neimwe nzira ndakapotsa iyo waranti info pandakaitenga. Yakazara kutsiva mukati memakore mashanu echinhu chisina kunaka chigadzirwa. Fungidzira kuti ndakundikana kuendesa izvi saka izvozvi ndichati ndinofara nekutenga kwangu. Pane imwe nguva isingawanzo kurema kunodonha asi izvo zvinogona kuve nyore kugadzirisa netepi diki tepi. Ndinochida.
Kutanga kubva pachigadzirwa zvinoita kunge pombi inodhura kunze kwebhokisi. Kukosha kukuru kwekuti pombi inotaridzika zvakadii. Inoshanda zvisina kana mutsindo futi. Zvakare zvinotaridzika zvinotyisa nesink yedu nyowani isina tsvina - dzinoenderana zvakakwana. Pandaive nepombi yekuisa pombi uye singi taive nedambudziko rimwe diki. Pombi yekupfapfaidza yakauya nepombi yedu yaive yakareba zvekuti yaida kubatwa pane zvimwe zvakaiswa pasink pazasi. Uku kwaive kunyatso gadzira nyaya pasi pesink yedu uye kwete nyaya yemupombi. Ndakataurirana nemutengesi uyu uye vakandiudza kuti vaizoita tsika yekupfupisa pombi yekutsikisa nyaya yedu. Pfungwa dzako iri raive dambudziko rakakonzerwa nekupomba kwemvura pasi pesink yangu uye kwete mhedzisiro yechigadzirwa chisina kunaka. Iyi kambani nguva pfupi yadarika yakanditumira iyo pombi yetsika yavakaratidza kuti yaizobatsira kudzikisira nyaya yangu. Yakashanda zvakakwana. Iyi kambani uye yavo timu yebasa revatengi yakaenda pamusoro uye kupfuura chero rubatsiro rwandakagamuchira munguva yakapfuura nezvinhu zvakatengwa pamutsetse. Kushevedzera kwakakosha kuna Nick nechikwata chake kuti vaende pamusoro nekure kuti vabatsire nenyaya yedu. Ini ndichave ndichiraira kubva kwauri kana kugadzirisa kwekugezera kuchatanga. Ndinokutendai nezvose zvamakaita kune mutengi anogutsikana.
Bhegi rakanga rakarongedzwa zvakanaka uye rakaiswa pakutsigirwa nefuro kudzivirira mukutakura. Zvikamu zvakanyorwa mune zvidiki zip zvehombodo mabhegi. Vaisanganisirawo zvimwe zvikamu.
Zvaive nyore kuisa. Mirayiridzo iri muChirungu nemirairo chaiyo. Zvakatitorera maawa 1.5 kubvisa zvekare nekuisa izvo zvitsva. Isu takatora rairo yemumwe muongorori uyo akapa zano reversing the hot and cold lines so hot so would be a push back and cold a push forward. Kugadziriswa uku kwaive kukodzera zvirinani kumhuri yedu. Chimwe chinhu chatakachinja kwaive kuwedzera kwehuremu hwekare pamwe nehutsva. Iyo nyowani yakashanda zvakanaka asi iyo yekuwedzera huremu yaive nani.
Mutengo waive wakanaka uye Hausi wakachipa kutarisa chero nzira.
Ini ndaikurudzira uye ini ndaizotengazve.
Pave nemwedzi miviri kubva patakaisa pombi uye iko kuita kwayo kuri stellar.
Ndakabatsira shamwari kuisa pombi iyi mumba make uye ndakafadzwa nemhedzisiro yacho, zvekuti ndakafunga kuisa imwe mukitchen yangu yemotorome. Iyo inogadzira inosanganisira maviri maadapter ekushandura kubva akasiyana saizi mitsara yemvura. Ndakatenda iko kubatisisa. Zvakare, iyo nati inoshandiswa kusungira faucet pasingi ine inenge 3 ″ refu 'yekubatirira' yakavakirwa-mukati, saka kusimbisa kwekupedzisira kunogona kuitwa zviri nyore neruoko, pasina kuda bhesheni bhureni. Chikamu chakaomarara kwaive kuburitsa faucet repombi. Kamwe izvo zvaitwa, kuisa iyi yaive mhepo inehukama.
Ini ndinoda pombi iyi yekicheni uye ndanga ndichiishandisa mwedzi mishoma ikozvino asi, mashandisiro ako anogona kusiyana nekuda kwezvese zvawakajaira pombi yako yekupedzisira.
Ndakaita mashoma epanyama uye epfungwa kugadzirisa uye izvozvi ndine ruzivo rwakanyanya nani kushandisa iyoowow. Rega ndivagovane newe.
1. Ndakachengeta huremu hudiki kubva pombi yangu yekupedzisira ndikaishandisazve… iyo yaisanganisira yakaramba ichirovera muvharuvhu yangu yemvura pasi pesinki.
2. Ndakatenderedza mubato kumberi, ndanga ndisiri kuwana iyo yekubata yepadivi, pamwe nemaoko ako akanyorova uye anodonhedza pamubhedha, nepo kana uri kumberi, pasina bongozozo. Uye mubato mupfupi saka hapana dambudziko kubuda kana kuvhara hari kana mapani.
3. Kutaura kwekubata mupfupi… huwandu hwacho "hudiki" pachibato ichi. Saka mupfungwa uchafanirwa kuchinjika… 1 ″ uye waguta kuputika! Ingo nyoro nyora 1/4 ″ kunze woenda kubva ipapo. Iyo yakasununguka zvishoma saka inodhonza uye inoshandura yakapusa nyore… zvakareruka kwandiri, asi kana ini ndakakunda izvozvo ndikazorora kudzora mubato… zvinyoro nyoro, ini ndakawana iwo chaiwo tembiricha & kuyerera.
Uku kubvumirana kukuru uye kwandiri, kunoratidzika kunge kuri nani pane pombi yangu yekupedzisira uye kana ndangoshandira kune zvakasarudzika zvevharuvha yekubata, ndinonzwa kuti inoshanda zvirinani pane yangu yekare mutengo wepamusoro wekitchen ini ndakatsiva.
Izvi zvinoita senge inogadzirwa zvakanaka uye inodhura imwe nzira kune mamwe ari nani mamodheru. Iyo inouya ne pre-yakabatana inochinjika hoses pamwe neparutivi yekubatanidza zvikamu kubvumira kumwe kumwe kubatana kana zvichidikanwa kuve. Ini ndakatevera kurudziro yemuongorori wekare uye ndikasimbisa kusimba kwemahosi ekubatanidza pombi pamberi pekumisikidzwa chaiko, ndichivimbisa kuti hapana kubvuza. Iko kuiswa kwese kwaikurumidza uye nyore. Ndave ndichifara kwazvo nekuita. Ungangoda kugadzirisazve nzvimbo yehuremu hwakabatanidzwa hunosungirirwa pahosi pasi pesinki uchibatsira kuburitsa pombi kuti irambe yakadzorerwa, asi iyi maitiro akareruka.
ndakaisa mapompu asingaverengeke ekicheni muhupenyu hwangu, ichi nekure kwave kuri kuchenesa, nekukurumidza uye kupusa kumisikidza. chero bedzi ivo vachichengeta yavo yazvino mhando, ini handimbofa ndakamboita nerimwe zita rechiratidzo. izvi zvinopusha chero epombi dzemitengo yakaderera inotengeswa neImba Depot kana yaLowe. kuyerera kwemvura kwakanakisa, pakubvisa vharuvhu inoshanda zvakakwana hapana kudonhedza gamma kuchinja pakati pekupfapfaidza nerukova imhepo uye kumbomira kwakanakisa. Ini ndaingopa zano chete kuti vagadzire iyo nut nut beefier. Iniwo ndinokurudzira zvikuru kuti dzive nezvidimbu zviviri nemapurasitiki mapapiro ekusimbisa iyo 3-hole ndiro. zvikasadaro uye zvakakwana Superior chigadzirwa chemutengo wakaderera kwazvo.
Ini ndaida iyo nyaya yekuti chinhu chaicho chaive chaizvo sekutsanangurwa. Uye zvakare, yaive yakarongedzwa zvakanaka mune yakanyatsogadzirwa zvakagadzirwa zvakaputirwa. Idzo nzira dzakareruka dzakabva dzaonekwa pachena. Pakupedzisira, kumisikidza yaive mhepo. Kunyangwe seisina hanya DIYer maitiro acho aigona kunge asina kumbotwasanuka kumberi. Ndanga ndichifarira chigadzirwa chekupedzisira kwemazuva mashoma ikozvino.
Iyi ipombi yakanyatsogadzirwa zvine mutsindo yakasimba inonzwa. Kutendeudzira zvese mubato wepombi pamwe chete nepombi pachezvayo kurudyi kuruboshwe zvinopa huwandu hwakaringana hwekudzivirira kusiyana nedzimwe sarudzo dzinovaka nehunhu hudiki. Pamusoro pezvo mitsara yemvura inopisa uye inotonhorera yakarukwa mitsara yesimbi uye haingopa chete kugadzikana kuri nani asiwo inotaridzika zvakanaka. Kuisirwa kwaive nyore, chaizvo sezviri nyore sezvinoonekwa muvhidhiyo yechigadzirwa. Iyo Hardware inosanganisira inoenderana yekuvhara ndiro kana singi yako iine matatu maburi. Yakareruka 3 nyeredzi.
Ndinoifarira. Ndakaisa pombi yangu nyowani nezuro ndichitsiva faucet yemakore manomwe yekuMoen yainetsa kutenderera. Ndakatarisa pamazita mahombe ndikavawana vachitanga nemutengo wakapetwa kaviri wechiyero ichi. Kuiswa kwaive nyore. Kubviswa kwepombi yekare kwainge kwakaoma nekuti nzungu yaisimudza yaive yakaoma kusvika uye yaida chipanera chepombi. Iyo nyowani unit haina uye ndokupinda nyore. Iwo mirairo yakanyorwa muchiChinese / chiAmerica asi yainzwisisika. Inotaridzika semhando dzinodhura nekunyatso pedzwa. ndaizotengazve izvi.
Ini ndanga ndisinganyatso tarisa pakuronga pombi kubva pawebhu, asi mushure mekuverenga wongororo ndainzwa zvirinani nezvekutenga iyo WOWOW Faucet. Mukomana ndiri kufara kuti ndakazviita. Ndakagamuchira pombi kubva kuwowow, ndakaiisa zviri nyore, nyore pane chero imwe faucet yandaisa. Ini ndaive nenyaya imwe chete, tambo yemvura inotonhorera yaive pfupi, asi kwete WOWOW's issue, yanga iri yangu. Ndakavatumira maemail uye vakanditumira waterline yakareba mahara uye pachena. Ndichangobva kuiisa uye yakakwana! Super nyore! Tinoda faucet iyi yakavakwa zvakanaka, iri nyore kuchenesa uye inotaridzika! Iyo yekumisikidza iri nyore nyore. Iyo pfapfaidzo hosi inotsvedzerera uye yakakura kutonga. Zvese A pluses pano!
Ini ndisingatarisiri ndaida pombi nyowani yekicheni. Zvinoita kunge chero chinhu chakanaka paLowe chiri $ 200- $ 300. Kungovatarisa kwaindipa kushushikana. Ndakafunga kutora mukana ndokuhodha iyi faucet kubva kuWOWOW. Ndanga ndichinetseka kuti chingave chakachipa mhando. Mukomana ndakanga ndakanganisa! Pombi iyi yakanaka mhando, yakapusa kuisa, yakauya nezvidimbu zvese zvinodiwa. Yakauya nemitsara mitsva yekupa mvura, ini ndaisatarisira izvozvo! Chiri kutonyanya nani ndechekuti chinotaridzika zvirinani pane chero chinhu chandakawana kuna Lowe, chakanyanya kutsetseka uye chazvino. Mushure mekuzvitenga ndakaona kuti mapenzi chete anoshandisa mazana emadhora pamapombi kubva kuzvitoro zvikuru zvehardware.